Home > Soomaali > Health Services > Immunizations needed for school
Dhamaan ardayda Dugsiyada Dadweynaha ee Minneapolis waa inay qaateen tallaaladii looga baahnaa, waana in dugsigu hayaa warbixinta tallaalka ilmaha si ardaygu u bilaabo dugsi. Ka caawi ilmahaaga inuu noqdo arday caafimaad qaba. Haddayna ahayn in la tallaalo llmaha sababo caafimaad dartood ama waalidka oo sidaa rumaysan awgeed, iskuulku waa in uu haystaa qoraal caddeynaya arrintaas.
Wac dhakhtarkaaga ama rugta caafimaadka si loogu dhamaystiro talaalka ilmaha iyo si loo baaro jirkiisa guud ahaan ama wac khadka HotShot ee Dugsiyada Dadweynaha ee Minneapolis (612) 668-0870. (Fiiri dhinaca kale waxyaabaha looga baahan yahay tallaalka.)
Ogow da’da ilmaha/heerka waxbarasho adigoo u akhrinaya dhanka midig.
Dugsiga kahor (da’da u dhaxeysa 3-5)
Gaaro da’da lagu bilaabo dugsi
7 jir ilaa fasalka 6aa
Fasalka 7aad ilaa fasalka 12aa
Eeg in ilmuhu tallaal kasta ka qaatay dhamaan tallaalada hoos ku taxan ee la calaamadiyey.
Fiiro- Gaar: Saf walba waa in si gooni ah loo akhriyaa, ha isku darin tirooyinka taxan ee ku hoos qoran tallaal walba.
Tusaalle: Ilmo waliba oo aan da’ dugsi gaarin wuxuu u baahanyahay tallaal oo 4 DTaP ah, ka bacdi markuu dugsiga isku diyaarinayana wuxuu u baahanyahay 1 kale oo tallaal DTaP ah, isku-dar waa 5 (ma’ aha 9)
Hep B cagaarshow nooca B
Tdap/DTaP/Td diphteria, teetano, xiiq (xiiq-dheer)
MMR jadeeco, qaamow-qashiir, jadeeco Jarmal
Hib Feyruuska ifilo-weysada nooca B
Ugu yaraan 1 dose
1 dose, tallaalada busbuska lagama doonayo ilmo hadii uu dhakhtar soo sixiixo foom dhahaya ilmahan cudurka busbuska horay ayuu ugu soo dhacay.
5 doses, tallaalka 5aad looma baahno hadii kii 4aad uu qaatay markuu 4 jirsaday ka di
4 doses, tallaalka 4aad ee dabaysha looma baahna hadii kii 3aad uu qaatay markuu 4 jirsaday ka dib
Ugu yaraan 3 doses
3 doses, fasalka 7aad oo keliy, tallaal cagaarshowga B ga ah oo kale oo laba jeer la kala qaadanayo ayaa la siin karaa caruurta da’doodu u dhexeyso 11 ilaa 15 sano jirka.
Ugu yaraan 3 doses, Hal talaal ayaa lagu darayaa marka ay jiraan 11-12 san, Hadii canug la siiyo tallaalka Td marka uu jiro 7-10 sano uma baahna tallaal kale marka uu jiro 11-12 sano. Haseyeeshee, waa in la siiyaa tallaal kale oo Td ah toban sano kadib markii ay tallaalkii ugu danbeeyey ee Td ah qaateen.
MMR jadeeco, qaamow-qashiir, jadeeco Jarmal\_
2 doses, fasalka 7aad oo keliy
In badan ka baro
Jirrada & Cudurrada La is-qaadsiiyo
Xaashiyaha inta badan la isticmaalo